Toolbox - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Toolbox
ပိုမိုလွယ်ကူ enable ရန်သင့်လက်ချောင်းထိပ်မှာအသစ်သော tools တွေကိုထည့်လေ့မရှိ, ပိုပြီးတိကျမှန်ကန်ကုန်သွယ်.
Button to ယင်းအချိန်အပိုင်းအခြားကိုပြောင်းလဲ, or to put it in အော်တို mode ကို.
Button + နှင့် – to change the lot size, သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် “: P” နှင့် “M က” အများကြီးအရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြတ်လမ်း.
လိုင်း 1 : Lot Size / နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ of the current candle / မှာစျေးနှုန်း mouse position.
လိုင်း2: တန်ဖိုးအား PIP သင့်ရဲ့ငွေကြေးအတွက် / ATR / ယ်ယူရန်ဖလှယ်ရန် / လဲလှယ်ရေးရောင်းပါ.
လိုင်း3: ပျမ်းမျှ pips in the last 20 ကာလ of the timeframe choose / the same information but in ပိုက်ဆံ.
လိုင်း4: Same thing but in the last 10 ကာလ.
လိုင်း5: Same thing but in the last5ကာလ.
လိုင်း6: Same thing in the အမှန်တကယ်ဖယောင်းတိုင်.
လိုင်း7: Pips အတွက်ပြန့်ပွား / အဆိုပါ ပြန့်ပွား၏ရာခိုင်နှုန်း over the average5ကာလ / သင့်ရဲ့ငွေကြေးအတွက်ပြန့်ပွား.
လိုင်း 8 : When you click on the chart you can have in your currency the အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းနှင့်မောက်စ်ကလစ်နှိပ်အကြားတန်ဖိုးက / idem in Pips / အဆိုပါ မောက်စ်ကလစ်နှိပ်စျေးနှုန်း.
လိုင်း9: သင် mouse ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ, you can have the number of ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပိတ်အကြား pips ofacandle / အဆိုပါ အမြင့်နှင့်အနိမျ့အကြား Pips of the candle / အဆိုပါ DATETIME of the candle.
သင်က activate လုပ်နိုင်ပါတယ် Estimated Time of Arrival of your take profit.
အများကြီး: the lot you usually use.
တံဆိပ်အရောင်: စာသား၏အရောင်ကိုရွေးပါ, အဖြူကို default ဖြစ်ပါသည်.
ActiveRangeLine: you can view the range of the average range of the last5ကာလ. [အယူမှား / စစ်မှန်သော]
LineColor: you can change the color of the range line.
ActiveTakeProfitETA : သင့်ရဲ့ယူအမြတ်အစွန်းထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောအခါအများ၏ရက်စွဲနှင့်နာရီပေး. [အယူမှား / စစ်မှန်သော]
သင်ဇယားပေါ်တွင်သင်၏မောက်စ်ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါသင်ဖွင့်ပါနဲ့ပိတ်အကြား pips အတွက်တန်ဖိုးမြင်နိုင်ပါသည် [OC] နှင့်မြင့်နှင့်အနိမျ့ [HL].
သငျသညျကိုလည်းအနက်ရောင်စတုရန်းတွေ့နိုင်ပါသည်, သင်သည်သင်၏ဇယားပေါ်မှာရွှေ့နိုင်ပါတယ်, နှင့်စာသားအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်.
သင်ကသင့်ကိုပြောပြမှာဇယားကို click လိုက်တဲ့အခါ (သင့်ရဲ့ငွေကြေးအတွက်) အဆိုပါကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်စျေးကွက်ပေါက်စျေးဘယ်လောက်ပိုက်ဆံခွဲခြား (အဆိုပါ PIP တန်ဖိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီး). ဒါကြောင့်သင်ကကုန်သွယ်ရေးဒီတစ်ခု၏အလားအလာဖွင့်ရှေ့တော်၌သိနိုငျ, နှင့်အန္တရာယ်အမြတ်အစွန်းလျှင်ကြည့်ပါ.
သင်တစ်ဦးယူရအမြတ်နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုအရောင်းအတွေ့နိုင်ပါသည်, ပထမဦးဆုံးယူအမြတ်ဒီရက်စွဲနှင့်အချိန်နာရီထိရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေါ့, နာရီတွေအများကြီးပြောင်းလဲ, ဒါပေမယ့်သင်ကစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပျပါလျှင်သိရန်ကောင်းပါတယ် 1 တပတ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်.
Toolbox တဲ့ Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Toolbox သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
ToolBox.mq4 install လုပ်နည်း?
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ ToolBox.mq4 မိတ္တူ / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
ToolBox.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator ToolBox.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ ToolBox.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးHeiken Ashi Histogram
Next ကိုဆောင်းပါးaccelerator လှို (AC အ)